संसारको 10 महँगो घरहरू र उनीहरूको मालिक - InHeadline
संसारको 10 महँगो घरहरू र उनीहरूको मालिक
By Sujata Bhattarai on Oct 24,2017 - 22:35
पहिले राजाहरु र सम्राटहरु ठूला भवनहरुमा बस्ने गर्थिए। हाल त्यस्ता घरहरू निर्माण गर्न न​ कुनै ठाउँ उपलब्ध छ, न त आधुनिक भवन निर्माणको साथ त्यस्तो निर्माण हुनेछ। धनी मानिसहरू सबै भन्दा राम्रा ठाउँहरू पत्ता लगाउन र बस्नलाई रोक्न सकिदैनन्​। केहि घरहरूमा पुरानो आर्किटेक्चरहरू हुन्छन्, र अरू नयाँ निर्माणहरू छन्।
संसारको सबैभन्दा लक्जरी घरको मालिक रहस्यमय गुच्छा हुन सक्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि बकिंघम पैलेस को मालिक छ, तर कसैले टिम ब्लक्ससेथको पहिचान गर्छ? वा भारतीय अरबपतिलाई थाहा छ जसले स्वयंको लागि एक 27- तल्ले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्यो? हामी अनुमान गर्यौं। CompareCamp.com द्वारा प्रदान गरिएको जानकारी प्रयोग गरेर, हामीले संसारको 10 भन्दा महंगा घरहरू - आधुनिक महलहरू, र तिनीहरूका भाग्यशाली र असाध्यै समृद्ध व्यक्तिहरूको पहिचान पाएका छौं। यहाँ विश्वको सबैभन्दा महँगो घरहरु र तिनका मालिकहरुको बिष्लेशण गरिएको छ​।
मूल्य: $ 1.55 बिलियन
विवरण: यो घर निश्चित रूपमा बिक्रीको लागि होइन। रानीको निवास लगभग 2012 मा राष्ट्रव्यापी भवन सोसायटीले लगभग 1.5 बिलियन डलरको मूल्य राखेको थियो। यो घरमा 775 कोठाहरू छन् जसमा 19राज्य कोठा, 52 वटा कोठा, 188 कर्मचारी कोठा,99 कार्यालयहरू छन् र 78 बाथरूम।
मालिक: ब्रिटिश सार्वभौमिक-वर्तमानमा रानी एलिजाबेथ जसले जुन6फेब्रुअरी, 1952 देखि शासन गरेकि छिन्।
The twenty-seven storey Antilia, the newly-built residence of Reliance Industries chairman
स्थान: मुम्बई, भारत
मान: $ 1 बिलियन
विवरणहरू: एन्टिटिया पनि पारंपरिक अर्थमा घर भन्न मिल्दैन​ । यो 27-कथा, 400,000-वर्ग फुटको निर्माण छ जसमा भूमिगत पार्किङ, तीन हेलीकाप्टर पैडहरू, र 600-कर्मचारी काम काजका लागि मात्र आवश्यक पर्दछ।
मालिक: मुकेश अम्बानी- भारतको सबैभन्दा धनी मानिस, सो घरको मूल्य 23.6 अरब डलर छ। अम्बानीले आफ्नो पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक ऊर्जा र सामग्री कम्पनी चलाएर कमाएका हुन्।
स्थान: कोटे डी'एयुरे, फ्रान्स
मान: $ 750 मिलियन
विवरणहरू: यस 50-एकड़ जमीनमा "व्यवसायिक आकारको ग्रीन हाउस, स्विमिंग पूल र पूल घर, एक आउटडोर भान्सा, हलीपैड, र धेरै मिलियन जहाजहरूको मकानभन्दा ठूला गेस्ट हाउस" समावेश गर्दछ। घर 1955 हिचक क्लासिकमा एक सेटको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
मालिक: लिली सफा-ब्राजीली पार्वतीवादी र लेबनानका बैंकर विलियम सफ्रा विधवा। उनको पतिको मृत्यु हुँदा अर्को जोडीको घरमा जलायो, जाडोको कारणले गर्दा।
न: सैन सिमेन, क्यालिफोर्निया
मान: $ 191 मिलियन
विवरण: 27-बेडरूम महल जुन The Godfather नामक फिल्ममा प्रयोग गरिएको छ। गाउडफेरले जॉन र ज्याकी क्यानेडी, क्लर्क ग्यारिटी, विन्स्टन चर्चिल, र अन्य प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको मेजबानी रहेको छ।
मालिकहरू: विलियम रन्डोल्फ हार्टस्ट ट्रस्टहरू - देशको पहिलो अखबारको म्यागरेट द्वारा बनाईएको महल, अब एक विरासत र पर्यटक स्थल र कैलिफोर्निया पार्क प्रणालीको भाग भएको छ​।
स्थान: उडसाइड, क्यालिफोर्निया
मान: $ 200 मिलियन
विवरण: यो घर कम्पाउण्ड भन्दा कम घर हो जुन 23- एकर सम्पत्तिमा 10 भवन, एक मानिस ताल, कोइ तालाब, चिया घर, र बाथ घरको समिस्रण घर हो।
मालिक: लैरी एलिसन ओरेकल को सह-संस्थापक र 2013 मा संसारको तेस्रो-सबै भन्दा धनी व्यक्ति।
18-19 केन्सेन्सन प्यालेस गार्डन
18-19 Kensington Palace
मान: $ 222 मिलियन
विवरणहरू: बिलियनियर्स पंक्तिमा अर्को सम्पत्ति, प्रिन्स विलियम र केट मिडलेसनको घरसँगै 18-19 सम्म बस्छ। यो निवासमा 12 बेडरूम, टर्की स्नान, एक इनडोर पूल, र 20 कारहरुको लागि पार्किंग छ।
मालिक: लक्ष्मी मित्तल - विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्माता आर्सेलर मित्तलको प्रमुख, र भारतको १०० धनी मानिसहरु मध्धे एक् जना पुरुष हुन्।
चार फेयरफील्ड तालाब
स्थान: सागापोनक, न्यूयर्क
मान: $ 248.5 मिलियन
विवरणहरू: यो 29-बेडरूम घर 63 एकरमा बनेको छ​ र यसको आफ्नै पावर प्लास्ट छ। भित्र, 39 बाथरूम, एक बास्केटबाल कोर्ट, बॉलिंग गली, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, तीन स्विमिंग पूल र एक 91 फुट लामो खाना खाने कोठा छ​।
मालिक: इरा रेनर्ट रेनको ग्रुपको मालिक, स्वत: निर्माण र गम्भीरतामा लगानीको साथ एक होल्डिंग कम्पनी रहेको छ​ र धातु र खननमा होल्डिंग्स पनि छ ।
स्थान: बिग स्काई, मन्टाना
मान: $ 155 मिलियन
विवरण: जेलेस्टोन क्लबमा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति जसमा मेगा धनीको लागि एक निजी स्की छ जसमा गोल्फ समुदायले घरलाई फलाम, बहु पूल, एक जिम, एक शराब तहखाने र यहाँ सम्म कि आफ्नै स्की लिफ्ट का साथ बनाएका छन्। ।
मालिकहरू: एड्रा र टिम ब्लेक्ससेथ-रियल स्टेट डेभलपर र काठको बारम्बार टिम ब्लेक्ससेथले जेलोनट क्लबलाई सहयोग गरे, तर क्लबको घाटा, तलाख​, र अन्य समस्याहरूले हालैका वर्षहरूमा सम्पतिमा कमी आएको छ।
केन्सेन्टन प्यालेस गार्डन
मान: $ 140 मिलियन
विवरणहरूः लन्डनका अरबपतिहरू पंक्तिमा स्थित, पहिले नै ट्रिगर गरिएको र चाँडै एक टेनिस कोर्ट, स्वास्थ्य केन्द्र, र स्वत: संग्रहालयसँग भूमिगत विस्तार थप गर्नेछ।
मालिक: रोमन एब्रामोविच - एक रूसी अरबपति र निजी लगानी फर्म मिल हाउस LLC को मालिक। उनी अंग्रेजीमा प्रिमियर लीगको चेल्सी फुटबल क्लबको स्वामीको रूपमा पश्चिममा जानिन्छन्।
7 माथिल्लो फिलीमोर गार्डन
मान: $ 128 मिलियन
विवरणहरू: यो 10-बेडरूम प्राइभेट स्कूल हवेलीले भूमिगत स्विमिंग पूल, एक सौना, जिम, चलचित्र, र यहाँको भित्ता कोठामा राखेको छ जसको इंटीरियरको अतिरिक्त संगमरमर, सुन, र अनमोल कलाकृतिहरु मा कवर गरिएको छ​।
मालिक: ओलिना पिंचुक-लियोनिद कुचमाकी छोरी, यूक्रेनको दोस्रो राष्ट्रपति। उनी एन्टिआइड फाउन्डेसन र एल्टन जॉनको मित्रको संस्थापक हुन .